Nagu saabsan - Handan Qifeng Carbon Co., Ltd.
Handan Qifeng Carbon Co., Ltd. waa soo saaraha weyn ee kaarboon ee Shiinaha, oo in ka badan 15 sano waayo-aragnimo wax soo saar, waxay ku siin kartaa qalabka iyo kaarboonka meelo badan. Waxaan inta badan soo saarnaa Waxyaabaha Kaarboonka (CPC & GPC) iyo koronto-garaafyada leh darajada UHP / HP / RP.
Ka dib sannado badan oo dadaal ah, wax soo saarka shirkadda Qifeng ayaa si heer sare ah loogu aqoonsaday macaamiisha gudaha iyo kuwa ajnabiga ah iyo iskaashi qoto dheer. Ujeeddadeennu: mar wada shaqeyn, iskaashi nololeed! Waqtigan xaadirka ah shirkadeena waxay inta badan ku howlan tahay baaritaanka kalluumeysiga batroolka ee loo yaqaan 'calcined coke' baaritaanka dhammaan noocyada cabbirka walxaha iyo korantada korantada ee laga bilaabo 75mm ilaa 1272mm wax soosaarka iyo iibinta, Baaruuddeena baaruudda yar ee baaruudda iyo baaruudda dhexdhexaadka ah iyada oo loo marayo baaritaankayaga xirfadleyda ah ee inta badan loo isticmaalo aluminium ka hor inta aan dubin qalabka anode , carburant casting iyo steelmaking, wax soo saarka titanium dioxide, batari lithium cathode wax, warshadaha kiimikada, iwm.
Warshaddeenu waxay leedahay qalabka wax soo saarka kaarboonka heerka koowaad, tikniyoolajiyad lagu kalsoonaan karo, maamul adag iyo nidaamka kormeerka oo qumman, shaybaarkayaga sheybaarka tayada waxsoosaarka oo qumman ayaa hubin kara in shixnad kasta ay u hogaansanaato shuruudaha macaamiisha, waxaan leenahay koox saad weyn, hubi badbaadada shixnad kasta oo waqtigeeda ku timaadda dekedda. Qifeng waa waafaqsan tilmaamaha dammaanadda tayada iyo tirada iyo sidoo kale adeeg aad u fiican. Awoodda dhoofinta bil kasta oo ka badan 10,000 tan oo alaab ah, waxaanna aad uga horreynaa shirkadaha gaarka loo leeyahay ee gudaha.
Waxaan si daacad ah u rajeyneynaa inaan la shaqeyno asxaabta adduunka oo idil si aan u dhisno Qifeng shirkad kooxeed oo leh firfircooni dheeraad ah, ku dhiirrigeliso in laga hortago, hal-abuurnimo joogto ah iyo horumar xoog leh.